တောင်သမန်သားလေး: March 2015
ဖုန်းပြောသမျှနဲ့ အသံဖိုင်တွေကိုပါ Record လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ - Call recorder (Full) v3.0.3 Apk
ဖုန်းပြောသမျှနဲ့ အသံဖိုင်တွေကိုပါ Record လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ - Call recorder (Full) v3.0.3 Apk လေးပါ 2in1 အမျိုး အစားလေးပါ အရေးကြီး ဖုန်းပြောသမျှ နဲ့ အရေးကြီး မှတ်သားစရာစကားတွေကို အသံဖိုင် သိမ်းထား ပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
Call recorder (Full) v3.0.3 Apk |7MB |
Resumable Links | Requires : Android 4.0 and up |
ဖုန်းဘက်ထရီကို အာအမြန်ဝင်စေပြီး ဆရာဝန်လို မပျက်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးမယ့် Battery Doctor (Battery Saver) v4.20.1 APK
ဖုန်းဘက်ထရီကို အာအမြန်ဝင်စေပြီး ဆရာဝန်လို မပျက်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးမယ့် Battery Doctor (Battery Saver) v4.20.1 APK လေးပါ ဖုန်း user တွေဆောင်ထားသင့်တဲ့
အောက်မှာ ဒေါင်းပြီးဆောင်ထားနိုင်ပါပြီ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
Posted in: Mobile Tutorial
Posted by lin linn at 5:18 AM
မြန်မာပွဲတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တိုင်းကို live score ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ - Futbol 24 APK
မြန်မာပွဲတွေကို live score ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ - Futbol 24 APK လေးပါ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံတကာအသင်း/ကလပ် အသင်းပွစြဉ်တွေရဲ့ ရလဒ်ကို အင်တာနက်ကလေးဖွင့်ပြီး live scoreကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ အောက်မှာဒေါင်းပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
APK Editor Pro 1.2.8 Apk (30-03-2015)
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆောဝဲလ်လေး Android pro ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အသုံးပြုပြီး မိမိဖုန်းထဲမှာရှိသော Android Application တွေကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရေးချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ဖုန်းထဲမှာပဲ
မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရေးပေးနိုင်မယ့် APK Editor Pro လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
အပြင်းပြေ ကလိချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ဖိုင်ဆိုဒ်က 3.7MB ရှိပြီး Android: 3.0 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ App ကို Play Store တွင် US$4.99 ပေးသွင်းမှသာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖော်ပြပါ Download Link တွင် အခမဲ့ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Posted by lin linn at 6:31 AM
Double Music Player လေးကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို တစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်ပြီး နားထောင်လို့ရတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်
နားကြပ်တပ်ပြီး နားထောင်ဖို့လိုပါမယ် pro version ဖြစ်သာကြောင့် play store မှာဆိုရင် ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပြီး အောက်မှာ free download ရယူနိုင်ပါတယ်
အသုံးပြုပုံက လွယ်လွယ်လေးမို့လို့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး
file size 283.4KB သာရှိပြီး android 3.2 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
This is the full version of Double Music Player
Size : 283.4KB
Double Music Player Pro v2.1 ကိုအောက်မှာ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်
Posted by lin linn at 6:30 AM
ဖုန်းအားအမြန်သွင်းပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေး - Battery Saver Pro v2.0.10 Apk
ဖုန်းအားအမြန်သွင်းပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေး - Battery Saver Pro v2.0.10 Apk လေးဗားရှင်းအသစ်လေး ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖုန်းသုံးတာများ လို့ ဖုန်းအားအမြန်သွင်းခြင် တဲ့ ဘော်ဒါတွေ
အောက်မှာဒေါင်းပြီး ဆောင်ထားနိုင်ပါပြီ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
Battery Saver Pro v2.0.10 Apk | 10 MB | Resumable Links | Requires : Android 2.3.3 and up |
ဖုန်းပြောသမျှနဲ့ အသံဖိုင်တွေကိုပါ Record လုပ်ပေးနိ...
ဖုန်းဘက်ထရီကို အာအမြန်ဝင်စေပြီး ဆရာဝန်လို မပျက်အော...
မြန်မာပွဲတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တိုင်းကို live sco...
ဖုန်းအားအမြန်သွင်းပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေး - Battery Saver ...
ဖုန်းထဲမှာ Video Edit & Create ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ်-...
Google Map တွင် ပါဝင်ခြင်း
My Ooredoo for iPhone
Huawei - China - Clone တွေကို Recovery Mode ဝင်နည်...
Replace Photo Background v1.4
ဘယ်ဖုန်းအမျိုးအစား ဗားရှင်းမျိုးကိုမဆို အလွယ်တ...
မန်ယူ ချစ်သူများတွက် >> မန်ယူ Facebook >မန်ယူ Them...
ချဲလ်ဆီးချစ်သူများတွက် >> ချဲလ်ဆီးFacebook >ချဲလ်ဆ...
♪ ဖုန်းခေါ်တဲ့ Dialer ကိုအနက်ရောင်များနဲ့လွမ်းခြုံထ...
လျှုိ့ဝှက်နံပါတ်လေးနဲ့ သင့်ဖုန်းကို lock ထားပေးနို...
ဖုန်းမှာမလိုတဲ့ Root ကိုပြန်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ - Root...
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ ၏ တရားတော်များ နားယူနိုင်မယ့် ap...
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရား၏ တရားတော်များ နာယူနိုင်မယ့် A...
Truecaller - Caller ID & Block v5.31 Apk (26-03-20...
Facebook က Video ကိုဒေါင်းလုပ်မယ့်- Fast Facebook ...
အသံနှင့် password လုပ်ပြီး အသံနှင့်password ဖွင့်မ...
ခုနစ်ပေ အကွာကနေ ဖုန်းကို လက်ဟန် ခြေဟန်နဲ့ ထိန်းချု...
ကဗျာဖွဲ့လောက်တဲ့ Android OS များအတွက်-christmas li...
♪ Non-Jailbreak iOS Device များတွင် မြန်မာစာရရှိအေ...
ကွန်ပျူတာ Laptooop သုံးစွဲသူများ သတိပြုရန် အချက်မျ...
Apple ID ကို မိမိ iPhone/iPad ဖြင့် အလွယ်တကူဖွင့်န...
ဖုန်းအဝင်အထွက်တွေကိုလိုသလို ချိန်﻿ဆပြီး ﻿ပြော﻿လို...
အရမ်းလန်းတဲ့ ရွှေရောင်ကီးဘုန် Dialer Frame Gold Wh...
Samsung Galaxy Note3Official Android 5.0 Lollipo...
♪ မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာလို့ရမယ့် ဝဘ်ဆိုဒ်တွေ ♫
အခုfacebookမှာခေတ်စားနေတဲ့ meme လေးတွေကို ကိုယ်တို...
Non-Jailbreak iOS Device များတွင် မြန်မာစာရရှိအောင...
♪ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး LinkedIn ဝန်ဆောင်မှု Android...
♪ Android Lollipop 5.0 တွင် On-Body Unlock လုပ်ဆော...
♪ မန်ယူချစ်သူများအတွက် မြန်မာလိုရိုက်နိုင်မယ့် Man...
ဖုန်းလေးနေတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် - RAM Manager Pro v7.1...
WiFi Manager v3.4.9 Apk (21-03-2015)
Hide pictures with LockMyPix v2.8.4 Apk (22-03-201...
Root Call Blocker Pro v2.3.3.14. Apk (March 22, 20...
ဖုန်းမှာ photo တွေလှအောင်ပြင်ပေးမယ့်-Hand Photo v2...
ဖုန်းပြောသမျှအော်တိုမှတ်ထားပေးမယ့် - Automatic Cal...
မြန်မာနိင်ငံသားတိုင်းရှိထားသင့်သော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပံ...
♪ စုံလင်တဲ့ Application ၊ Game များစွာကိုလွယ်ကူစွာ...
♪ ဖုန်းတစ်လုံးကို ဘယ်လိုအချက်လက်တွေကြည့်ပြီး ဘယ်လိ...
Asus Zenfone 4/5/6 V4.4.2 ဖုန်းများကို One Click န...
LG L90 ဖုန်း Android 4.4.2 တွေကို Root အလွယ်တကူလုပ...
လျှို့ဝှက်ဗီဒီယို ကင်မရာလေး - Secret Video Record...
ရသစာပေတွေချည်းစုထားတဲ့ အတွေးစာစုများ APK
ဂစ်တာကိုပရိုတစ်ယောက်လိုနားလည်စေနိုင်တဲ့ - Guitar P...
Lock Screen ဒီဇိုင်းအလန်းလေး Keypad Lock Screen
ဖုန်းမှာအင်တာနက်လိုင်း speed နှုန်းကိုပြသပေးတဲ့ - I...
Samsung Firmware မှာပါတဲ့ကုဒ်တွေကို လေ့လာမယ် ( For...
♪ Facebook Messenger မှ ငွေပေးပို့နိုင်ပြီ ♫
Blogger Admin များအား လွပ်လွတ်စွာ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
RAM လေးနေတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် -RAM Manager Pro v7.1.6...
Video တွေကြည့်ရှုရန်လိုအပ်မယ်-Archos Video Player v...
ဖုန်းမှာပြောသမျှကို Record မှတ်သားပေးနိုင်တဲ့ - Su...
Internet Speed Meter v1.4.8 Patched
2 Battery Pro – Battery Saver v3.19 Apk
တာဝါတိုင် ၁,၆၀၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု Telenorေ...
MPP သတင်းစုံများကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းနိင် ပါသည်။